«May volon-tratra» -
12/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Nilaza ho vonona handray ny tsikeran’ireo kandidà amin’ny tsy fahatomombanan’ny fikarakarana ny fifidianana ny CENI. Nilaza ny efa miantso, ary hamory azy ireo araka izany ity rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana ity, amin’ny faran’ny herinandro izao. Hodinihina miaraka ireo ambara fa lesoka rehetra ahafahana miroso amin’ny fiatrehana izao fifidianana filoham-pirenena izao. Rehefa mitsikera mantsy, dia tokony hitondra vahaolana mifandraika amin’izay ihany koa izy ireo, raha ny fanazavan’ny CENI.
Raha tsiahivina dia maro ireo tsikera miantefa any amin’ity andrim-panjakana ity manodidina ny fikarakarana ny fifidianana. Ny tena misongadina amin’ireny dia ny tsy fahatomombanan’ny lisitry ny mpifidy. Maro mantsy ireo olona tsy tafiditra anatin’io lisitra io manerana an’i Madagasikara raha ny nambaran’ireo kandidà. Tranga tsy azo ekena mihitsy satria manary ny zon’ny olom-pirenena, izay tokony hanatanteraka ny adidiny, ka mahatonga azy ireo mitaky ny hanokafana indray io lisi-pifidianana io.
Vonona ny hanatanteraka izany àry ve ny CENI? Ity farany izay fatra mpanaja ny lalàna, ary efa nilaza fa rehefa nogiazana ny lisitra dia tsy azo sokafana intsony. Antony mbola mahatonga ny ankamaroan’ireo kandidà manohy ny fitakiany, ny amin’ny tokony hanokafana izany hatramin’ny androany. Izay no antony nahatonga ny fanontaniana hoe hodikaina indray ve izany ilay lalàna efa nambaran’ny CENI, ka izay no mahatonga azy ireo vonona amin’ny fifampiresahana amin’izao fotoana izao?
Ny tsikaritra loaha dia samy “may volon-tratra”, na ny CENI izay manahy ny tsy ahatanterahan’ny fifidianana noho ny fanakianana maro mahazo azy amin’izao fotoana izao, na ireo kandidà efa mahafantatra fa tsy ho lany, ka manao izay ho afany amin’ny fitadiavana ireo hevitra rehetra hanemorana, na hanafoanana mihitsy izao fifidianana izao.